တစ်စုံတည်းသာရှိသော ကျောင်းဝတ်စုံကိုဝတ်ပြီး ရေစိုရင်အကြော်ဖိုမှာသွားကင်ရသူ သူများအိမ်မှာကပ်နေပြီး အိမ်ရှင်ကျေနပ်အောင်ရေစည်လှည်းတွန်းခဲ့ရသူ ခေတ်သစ်ဝေဿန္တရာသူဋ္ဌေး ဦးစိုးတင့်(စိုးလျှပ်စစ်)အ​ကြောင်း – Lat Khat Than
တစ်စုံတည်းသာရှိသော ကျောင်းဝတ်စုံကိုဝတ်ပြီး ရေစိုရင်အကြော်ဖိုမှာသွားကင်ရသူ သူများအိမ်မှာကပ်နေပြီး အိမ်ရှင်ကျေနပ်အောင်ရေစည်လှည်းတွန်းခဲ့ရသူ ခေတ်သစ်ဝေဿန္တရာသူဋ္ဌေး ဦးစိုးတင့်(စိုးလျှပ်စစ်)အ​ကြောင်း
(18.5.2016)နေ့က ဆိုက်ကားဆရာ ၅၀အတွက်သိန်း၅၀လှူ ဒါန်းပြီးနောက်ညနေပိုင်းမှာ မိုးပြေးလေးများဖြင့် အလှူဒါနကိုရေစက်ချလိုက်၏။
(19.5.2016) နေ့မှာ ထပ်မံပြီး ဆိုက်ကားဆရာ ၆၃၀ ကျော်အတွက် တစ်ယောက်တစ်သိန်း.ကိုယ်ထိလက်ရောက်လှူဒါန်းပြီးသည်နှင့်ပျဉ်းမနားတမြို့လုံး ငရဲပြည်မှဆွဲထုတ်သွားသလို ချက်ချင်းအေးစိမ့်သွားတဲ့အရသာအောက်မှာ ကျွန်တော်အပါအဝင် ဆိုက်ကားဆရာများလဲညစာဟင်းကောင်းတစ်ခွက်နဲ့အတူ သူ့အကြောင်းတွေးနေကြမှာ မလွဲပါ ။
ပျဉ်းမနားမြီု့ရှောင်လမ်းမကြီးဘေး အောင်းကုန်း ရွာကလေးမှာ ဦးဘိုးကြွယ်&ဒေါ်အမာ မိဘနှစ်ပါးမှမွေးခဲ့ပြီး မွေးချင်း၃ယောက်အနက် အငယ်ဆုံးသား ။ အမေကလဲဆုံး ..အဖေကလည်းကျန်းမာရေးမကောင်း ,အစ်မကြီးကလဲ အိမ်ထောင်ပြု အစ်ကိုကလဲအဝေးရောက် ။ စာသင်ချင်လွန်းလှတဲ့ဦးစိုးတင့် အ.ထ.က (၂)သို့ကျောင်းတက်ဖို့ ရောက်လာတော့ ဝတ်စုံတစုံသာပါလာသည်။ သူများအိမ်ကနေ ကျောင်းတက်ရသည်မို့ အိမ်ရှင်ကျေနပ်ဖို့ရေခပ်ရသည်။ ရေစည်လှည်းသမားနဲ့အတူနောက်ကနေ ကူတွန်းရသည်။
မိုးရွာလျှင်တစုံတည်းရှိကျောင်းဝတ်စုံကို အကြော်ဖိုသုိ့သွားပြီး မီးကင်ရသည်။ စာကျက်ရင်လမ်း ဘေးမီးတိုင်အောက်သွားပြီး စာကျက်။ လူကြီးများထံမှ မုန့်ဖိုးတောင်ဖို့ဝေးစွ တနှစ်တခါကျောင်းထားပေးရင်ကို သူဝမ်းသာလှပြီ။ဆင်းရဲလွန်းလှတဲ့ ထ/၂ကျောင်းသား ဦးစိုးတင့်။ စာအုပ်ဖိုးငွေကို သူ့ဆရာများက ထောက်ပံခဲ့ရသည်။ ရှစ်တန်းတွင်တစ်ဘာသာဂုဏ်ထူး အမှတ်ကောင်းကောင်းဖြင့် သိပ္ပံလိုင်းမှအောင်မြင်ခဲ့သည်။
၁၉၆၈ခု ယခုလိုကျောင်းဖွင့်ရာသီတွင် ၉တန်း ဆက်မတက်တော့ဘဲ ဆရာများအကြံပေးမှုအတိုင်း ရန်ကုန်နတ်မောက်T.H.Sကျောင်းသို့ EP ဖြင့်တက်ရန်အဝတ်အစားအဟောင်းနှစ်စုံ ခေါင်းအုံးပါးပါးလေးကို စားပွဲခင်းဖြင့်ထုတ်ပြီး ဆရာများမှစုပြီးပေးလိုက်ငွေတစ်ထောင်ကျပ်ကို သေချာဆုပ်ပြီး ရန်ကုန်တက်ခဲ့ရသည်။
ကျေးဇူးကြီးလှသောသူ့ဆရာမ ဒေါ်လှစိန် နှင့် ဆရာဦးရဲမြင့်တို့က ကျောင်းပြီးသည်အထိထောက်ပံ့ခဲ့ကြသည်။ ရန်ကုန်စည်ပင်တွင်တနေ့ခြောက်ကျပ်ခွဲ အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ ရာထူးဖြင့်လုပ် ကိုင်လာသောလဲမကြီးပွားနိုင်သဖြင့် ထွက်ပစ်ကာ အပြင်တွင်လျှပ်စစ်နဲ့ပတ်သက်သောကိုယ်ပိုင်အလုပ်ကို စလုပ်ခဲ့သည်။ အထင်မကြီးပါနှင့်ဦး. .စစ်လွယ်အိတ်ထဲတွင် ဝက်အူလှည့်ပလာယာထဲ့ကာ ပန်ကာမော်တာ ရေစက်မိုတာပြင်ရုံသာဖြစ်သည်။
လုပ်ငန်းလေးကောင်းလာသဖြင့် ရွှေဂုံတိုင် ဗန်ဒါပင်ဈေးနားကအခန်းကိုငှားချင်သည်။ စပေါ် ၅၀၀၀မတတ်နိုင်သဖြင့် နောင်တွင်ပါရမီဖြည်ဖက်ဖြစ်လာမည့်အထည်သည် မရင်နုထံမှ ငွေချေးယူရသည်။ ထိုခေတ်အချိန်ကကုန်ကြမ်းပစ္စည်း အလွန်ရှားသည်။ ရေခဲစက်.ဆန်စက်..ဆီစက်များ အသုးံများလာသဖြင့် မော်တာတွေအပျက် များလာသည်။အလုပ်ကောင်းလာသဖြင့် အလုပ်သမား၅ဦးခန့်ပါ နေလို့ရမည်အိမ်ကိုငှားပြီး အလုပ်လက်ခံသည်။
တနေ့ ဦးစိုးတင့်၏ဘဝကိုအလုံးစုံ ပြောင်းပစ်တော့မည့်သူပေါ်လာပါသည်
သူကား ပျော်ဘွယ်မြို့တွင်မသိသူမရှိ ဘေဘီဦးအုန်းမောင် ပင်ဖြစ်သည်။ အသားဖြူဖြူ ပုပုအမြဲတက်ကြွနေသော ဆီစက်/ဆန်စက်သူဋ္ဌေးကြီးဖြစ်သည်။ သူ့တွင်သား၃ ယောက်ရှိသော်လဲ အဖေ့ခြေရာမနင်းနိုင်ကြ ။ သူဋ္ဌေးသားသည် သူဋ္ဌေးကြီးရှာထားသောငွေကိုဖြုံးဖို့မွေးလာသူများဟုခံယူထားကြသည်။
သားကြီးဖြစ်သူကိုကျော်ကြီး၏ အာမခံမှုကြောင့် ဦးစိုးတင့်နှင့်တွေ့ပြီးနောက်ပိုင်း လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ရဲ့အရည်အချင်းများ အတွေးအခေါ်များ။ လူတယောက်ကိုမြင်သည်နှင့်သူဘာပြောချင်နေသည်။ ဘာဖြစ်ချင်နေသည်ဆိုသည့်လူကဲခတ်အတတ်ပညာများကို သားအရင်းနဲ့မခြားညတိုင်းသင်ပေးသည်။ ဦးစိုးတင့်မှလည်း သေသေချာချာမှတ်သားသည်။ နှုတ်အားဖြင့်စောင်မကြည့်ရှုသည်သာမဟုတ်။ ငွေအားဖြင့် ဗိုလ်စိန်မှန်ရပ်ကွက်အတွင်း အိုးပိုိင်အိမ်ပိုင်ဖြစ်စေရန် စိုက်ထုတ်အကုန်အကျခံသေးသည်။ မန္တလေးမှ ဆီစက်ဆန်စက်သူဋ္ဌေးများဖြင့် ချိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။
၁၉၈၈..န.ဝ..တ ခေတ်တွင်မအောင်မြင်သောစီမံကိန်းများမှ အပုံအပင်ပစ်ထားသော ထရန်စဖော်မာကြီးများ။ အသစ်ဝယ်ရန်လဲအစိုးရမှာ ဒေါ်လာ မရှိ။ ပျက်တာလေးလောက်မှာပြန်တော့ မော်ဒယ်ကအောက် ။ ဦးစိုးမြင့်ကိုဘဲ အားကုိုးရတော့သည်။ နိုင်ငံအတွက် အဓိကလိုအပ်နေသော ဟာကွက်ကိုသိရှိပြီးနောက် စိုးလျှပ်စစ်နှင့်စက်ကရ်ိယာကုမ္ပဏီ တည်ထောင်ပြီးရဲရဲတွေး ရဲရဲလုပ်ကာ ကိုယ်ပိုင် SOE တံဆိပ်ဖြင့်ထရန်စဖော်မာများထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။
ဆင်းရဲလွန်းခဲ့သောသူ့ဘဝ။ သူ့လိုဆင်းရဲမှာကိုနောက်ဘယ်တော့မဖြစ်စေရန်ရည်ရွယ်ပြီး သူနေခဲ့တဲ့ရွာ ။ သူစာသင်ခဲ့တဲ့ကျောင်း သူ့အပေါ်ကျေးဇူးရှိတဲ့မြို့ ။ သူ့ဆရာသမားတွေကို ဆက်တိုက် ဆက်တိုက် လမခြား နှစ်မခြားတော့ဘဲ လှုစရာနေရာမကျန်တော့အောင်ကိုလှူဒါန်းနေတာလဲ ပျဉ်းမနားမြို့လုံးသိ။
ပညာရေးပိုင်းတွင် ခေတ်မီမူလွန်ကျောင်းလေးများကို နေရာအနှံ့ခိုင်ခန့်သပ်ယပ်စွာဆောက်ပေးထားသည်။ သူနေခဲ့သည့်ကျောင်းကိုလဲနေရာကျဉ်းကျဉ်းလေးကိုဘဲ အမိအရလေးထပ်လန်ပျံထွက်သွားအောင်ဘာမျှတောင်းဆိုစရာမလိုအောင်ကိုလှူဒါန်းရေစက်ချခဲ့သည်။နေရာကျယ်ဝန်းသည့် ထ/၁တွင် ဓမ္မာရုံကြီးကို ဟီးထနေအောင်ဆောက်လုပ်လှုဒါန်းခဲ့ပြီး ။ ပညာရေးတွင်ထူးချွန်သူများကိုစိုးလျှပ်စစ်ပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းမှ ကျောင်းပြီးအလုပ်ရသည်အထိ တာဝန်ယူခဲ့သည်။ အခမဲ့ကွန်ပြူတာသင်တန်းများကိုလဲဖွင့်လှစ်သည်မှာ အပတ်စဉ် (17)တောင်ရောက်ပြီဖြစ်။
ဦးစိုးတင့် &ဘုရားဒါယိကာမကြီး ဒေါ်ရီရီမာ(ခ)ဒေါ်ရင်ရင်နု သား..ဦးကျော်မင်းထွန်း &ဒေါ်မျိုးမျိုးခိုင်….မြေး…မောင်သုခစိုးမိသားစုတို့မှ အေးငြိမ်းချမ်းသာဆုတောင်းပြည့်စေတီတော်ကြီးကိုလှူဒါန်းခဲ့ပြီး။
ဟောင်နွမ်းယိုယွင်းနေသော ဝတ်ဖြူတော် ၈ သင်းမှ ဓမ္မရုံ ၈ ခုကိုလဲအပိုင်နေရာမရှိသေးပါက မြေပါအပြီးအပြတ်ဝယ်လှူကာ ခေတ်မီခန့်ညားထည်ဝါလှသည့် ဓမ္မ္ပာရုံကြီးများမှာလည်း တချိန်တည်းအပြိုင်ဆောက်ကာအချောသပ်နေကြပြီဖြစ်သည်။ထိုဓမ္မရုံကြီးများတွင်စဉ်ဆက်မပြတ်လုပ်လာခဲ့ကြသည့် ၇၀ ကျော်အဖိုးအဖွားများရဟန်းသံဃာတော်များ/ သီလရှင်ဆရာကြီးများ အယောက် ၁၀၀ကိုလဲ ဗုဒ္ဓဂါယာ သို့ဘုရားဖူးခရီးစဉ်တွင် ကျမ်းမာရေးအတွက်ဆရာဝန်တစ်ဦးပါထဲ့ပေးပြီး ဟိုနိုင်ငံရောက်ပါက လှူဒါန်းနိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ ဒေါ်လာငွေ ၁၀၀စီကိုအသေးစိတ် လိုလေသေးမရှိကုသိုလ်ပြုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါသည်။
ပျဉ်းမနားသံဃာ့ဆေးရုံအတွက်လဲ မပြတ်လှူဒါန်းနေသလို။ ပြီးခဲ့သည့်မွေးနေ့အလှုတွင်ည်း ပင့်သံဃာ အပါး ၁၅၀၀အတွက်တစိပါးလျှင် ဝထ္ထုငွေ ငါးသောင်းကျပ်အပြင်လှုဖွယ်ပစ္စည်းစုံလင်စွာဖြင့်လှုဒါန်းခဲပြီးဖြစ်၏
လူမှုရေးအပိုင်းတွင်လည်း အကျယ် ၆ဧကရှိမြေတွင် ကျပ်သိန်းပေါင်းနှစ်သောင်းငါးထောင် အကုန်အကျခံကာ အေးငြိမ်းချမ်းသာဂိလာနဘိုးဘွားရိပ်သာကြီး တည်ဆောက်ပြီး အဖိုးအဖွားများအတွက် စားရေးသောက်ရေး ကျန်းမာရေးများ အလုံးစုံတာဝန်ယူပြီး အမြဲခန့်ဝန်ထမ်းများဖြင့် မလစ်ဟင်းအောင်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။
နှစ်ပေါင်းများစွာရိပ်သာကြီး အဓွန့်ရှည်စေရန် များပြားလှသောငွေကြေးများ မတည်ထားရှိပြီး သက်ဝင်လှုပ်ရှားနေစေရန် ခေတ်မီစိတ်ကူးတခုဖြစ်သည့်မီးခိုးတလူလူ စက်သံတဘောင်းဘောင်းဖြင့် ၅ နှစ်ခန့်မောင်းနှင်နေသည့်ပျဉ်းမနားသား စစ်စစ် အယောက် ၅၀ ကိုလဲ ခေတ်မီ Hijetကားဖြင့်အလကားလဲလှယ်ပေးပြီး ရိပ်သာကြီး နောင်ရေးအတွက်စိတ်အေးရအောင်လုပ်ပေးခဲ့သည်။
မြို့လူထုအတွက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာတွင် တောင်/မြောက်ဆက်သွယ်ထားသည့် ငလိုက်ချောင်းကူးတံတားအသစ်ကြီးကို ၂လမ်းထိပ်တွင်ဆောက်လုပ်နေပြီး ကျဉ်းလွန်းလှသော ၆လမ်းတံတားကို သံကူကွန်ကရစ်ဖြင့် ၄လမ်းသွားတံတားဖြစ်အောင်ဆောက်နေကာ ပြီးစီးပါက ၉ လမ်းတံတား နှင့် ၈၅ တံတားကြီးကိုပါ ထပ်ချဲ့မည်ဖြစ်ပါသည်။
အားကစားဖက်တွင်လည်း စိုးလျှပ်စစ်ဖောင်ဒေးရှင်းဖလားကို နှစ်စဉ်မပျက်ကျင်းပနိုင်အောင်မတည် ရံပုံငွေထာရှိပြီးဖြစ်သည် နှစ်ကျပ်ရှစ်ဆူပွဲနီးလာပါက အဆိုတော်ငှားရခြင်း,တီးဝိုင်းငှားရခြင်း ,ဆိုင်းဝိုင်းငှားခြင်း ဒုက္ခကင်းဝေးစေရန် မြို့ပေါ်ရွာစာဆရာကြီးများ/ ခေတ်ပေါ်ဂီတပညာရှင်များ/အသံပိုင်းဆိုင်ရာပညာရှင်များဖြင့်လည်း တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
ရေးလို့ကုန်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်မသိတာတွေမြောက်များစွာ ကျန်နေပါလိမ့်မည်။ FB ပေါ် တက်လာသမျှလေးသာ ဖြစ်ပါသည်။
လွန်ခဲ့သည့် ၄ရက်ခန့်က အက်စီးဒင့်တခုကြောင့်ကွယ်လွန်ခဲ့သည့် ပင်လုံဆေးရုံ.ရွှေဂုံတိုင်ဆေးရုံ,ဥတ္တရသီရိဆေးရုံ နှင့် Universal Medical Centre Co,Ltdတိုိ့ရဲ့ ပိုင်ရှင် ခရိုနီဟုသမုတ်ခံသူတဦးကွယ်လွန်ခဲ့ရာတွင် သူ့ဇာတိမြေ ဝါးခယ်မမြို့အတွက်ဆေးရုံနှင့်သက်ဆိုင်သော အလှုသေးသေးလေးတခုသာလှူဒါန်းနိုင်ခဲ့သည်။
ကျေက်စိမ်းဘုရားကြီးလိုကမ္ဘာကျော်အောင်လှူဒါန်းခဲ့သော ဘုရားဒါယကာသည်လည်း ခရိုနီမဟုတ်ပါ။
ပျဉ်းမနားမြို့သည်စာရေးဆရာ,ကဗျာဆရာများထွန်းကားသည့်အလျှောက် ဆရာကြီးသော်တာဆွေရေးခဲ့သည့် `ငွေကို လေလိုသုံးလေသူ´စာအုပ်ကြောင့် မိုးကုတ်မြမောင်သည် ကမ္ဘာကျော်ခဲ့သလို ပျဉ်းမနားမြို့အပေါ်ထားရှိတဲ့ စိုးလျှပ်စစ်ဥက္ကဌ ဦးစိုးတင့်အကြောင်း ခန့်ခန့်ညားညားမှတ်မှတ်ထင်ထင်ကို မျိုးဆက်သစ်ကလေး လူငယ်အပေါင်းတို့ ကိုယ်ရပ်ရွာကောင်းကျိုး နောက်မဆုတ်တမ်း အားကျအတုယူလာစေရန် ကျောင်းဆရာ/ဆရာမအပေါင်းက၎င်း စာရေးဆရာများ မြို့လူထုကပါစုပေါင်းပြီး ကျွန်တော်တို့အပေါ်တင်ရှိနေတဲ့ သူရဲ့ကျေးဇူး အကြွေးတွေကို နိုင်သလိုပြန်ဆပ်ကြပါစို့။
Yin Yin Thein Naba
ကျောင်းဆရာ(စာရေးဆရာ)တစ်ဦးက အသက် ၅နှစ်အရွယ်ကျောင်းသူအား မတရားချုပ်နှောင်၍ အဓမ္မပြုကျင့်